🥾 arag & samee | Booqo Hultsfred
🥾 arag oo samee
Bogga hore » 🥾 arag oo samee
Wax badan oo madadaalo ah ayaa ka jira degmada Hultsfred iyo howlo badan oo ka qeyb qaadanaya. Booqashada qoyska ee madxafka? Ama raac raad raaxo qurux badan? Wax kasta oo aad rabto inaad hindiso, waxaan kuu haynaa talooyinka adiga kaliya!
Hagadal ee isgoysyada barafka
Reviews Track iftiin koronto gaaban
Dackeslingan waxay ku dhowdahay jiirada barafka ee Dackestupet. Waddadu waxay cabbirtaa wadar ahaan 1,2 kiiloomitir oo leh socod fudud iyo mid ka dhib yar. Jidka waxaa loo wadaa gabi ahaanba faa'iido la'aan
Kaniisadda Målilla-Gårdveda Sanadkii 1800, labadii kaniisadood ee Målilla iyo Gårdveda waxay samaysteen kiniisad wadajir ah. Tani ka dib booqashadii hoggaamiyaha kiniisaddu markay ahayd 1768 markii kaniisadaha M woodenlilla iyo Gårdveda labaduba alwaax ka sameysnaayeen
Kaniisada Vena waa kaniisad ka mid ah kaniisadaha qaranka ee ugu weyn gudaha magaalada Linköping. Bilawgii, kaniisaddu waxay degtay ku dhawaad ​​1200 oo qof. Dhowr dib-u-soo-celin ka dib markii kuraas la qaaday
Kaniisadda Mörlunda waa mid aad u qurux badan oo dhinaca dheer ku aaddan Emådalen. Kaniisadda hadda la dhisay waxaa la dhammaystiray 1840, laakiin horaantii 1329 ayay u badan tahay in kaniisad ku taal isla goobtaas.
Kaniisada Hultsfred, oo ah magaalada ugu weyn degmada, runti waxay leedahay kaniisada ugu da'da yar. Qorshayaal lagu dhisayo kaniisad ku taal Hultsfred ayaa jirtay in muddo ah waxaana la sameeyay 1921
Kaniisadda Virserum waxaa lagu dhisay qaab neo-Gothic ah oo leh astaamo sarre leh oo daaqado iyo boggag leh. Kaniisadda hadda jirta ee Virserum waxaa la dhisay sannadihii 1879-1881. Ku
Kupan wuxuu kugu soo dhaweynayaa tukaankooda gacanta labaad ee cajiibka ah. Wuxuu furanyahay inta udhaxeysa 10-16 jimcaha, sabtida iyo axada.